लकडाउनमा ९६ वर्षिय वृद्धले ८४ वर्षीय वृद्धासंग गरे धुमधामसंग विबाह (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > लकडाउनमा ९६ वर्षिय वृद्धले ८४ वर्षीय वृद्धासंग गरे धुमधामसंग विबाह (भिडियो हेर्नुस्)
Poonam May 19, 2021 भिडियो, रोचक, समाचार 0
काठमाडौं । विबाह जीवनको एउटा सुन्दर प्रकृया हो । विबाहले एक अर्काको मनको कुरा बुझ्दै सम्मान गर्नमा सहयोग गर्ने गर्दछ । विबाह गर्नु भनेको जीवनको सुख दुःख सबै एकअर्कासंग साँट्नु जान्नु पनि हो । सामाजिक नियम अनुसार विबाह विशेष गरी उमेर पुगेका युवा युवतिबीच गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर विबाह मनमनको बीचको एउटा डोर भएको हुनाले यस्मा कुनैपनि कुराको बन्देज हुँदैन । मन मिल्नेसंग विबाह हुने भएको हुनाले नै कतिपय विबाहमा उमेरको बेमेल पनि भएको देख्न पाईन्छ ।
यस्तै एउटा विबाह भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ । जहाँ बेहुला ९६ वर्षको र बेहुली ८४ वर्षकी छन् । उनीहरुको दुुवैको विबाहमा सबै आफन्त र समाजका मानिसहरुको उपस्थिति रहेको देख्न सकिन्छ । यो विबाह कोरोनाको कहर बीचमा नै भएको छ । जुन विबाह सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भाइरल भएको भिडियोबाट थाहा भएको छ । टिकटक एउटा यस्तो संजाल हो जहाँ सबै मानिसहरुले आफ्नो प्रतिभा पस्कने गरेका छन् । कति मानिसहरु यहाँबाट निकै नै भाइरल बनेका छन् । त्यस्तै कयौ म्युजिक भिडियोहरु पनि यहि टिकटकबाट नै भाइरल हुने गरेका छन ।
त्यस्तै अहिले पछिलो समयमामा एउटा विबाहत जोडी खुबै भाइरल भइरहेको छ । यो जोडी भाइरल हुने कारण यो छ कि, उनीहरू दुवैजना वृद्ध वृद्धा हुन् । कतिसम्म भने बेहुली ८४ वर्षकि वृद्धा हुन भने ९६ वर्षका वृद्धा हुन । त्यस्सैकारणले पनि यो जोडी खुबै भाइरल भएको छ । यो जोडीको बिहेको भिडियोलाई २४ घण्टामा मात्र १४ लाख भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । त्यस्तै यसमा लाइक पनि १ लाख भन्दा बढी रहेको छ । भिडियो
टम ब्वाई लुक्समा यस्ती देखिईन् माहिरा शर्मा, इन्टरनेटमा छायो उनको यो तस्वीर
नेकाँ अध्यक्ष देउवाकाे गृह जिल्लामा बिबि हेल्पिङ हेण्ड्स देउवा भन्दा अगाडि, अक्सिजन सिलिण्डर वितरण!
के गर्भवती महिलालाई शा-रिरीक सम्बन्ध राख्ने इच्छा हुन्छ ? (भिडियाे सहित)